Somaali Turjumaan FBI ah oo lagu xiray dalka Mareykanka. – Kismaayo24 News Agency
by admin 7th May 2019 045
C/risaaq Xaaji Raage Wehliye oo ah Khabiir Luqadaha waxa uu Qandaraasle Turjumaan ah ka ahaa Hay’adda Dembi-baarista fedealka Maraykanka ee FBI-da sannadihii 2012-kii ilaa 2015-kii, isagoo Hay’adda u turjumi jirey dadka la tuhunsan yahay iyo codadka sheekeysiga Telefoonadda ee la duubo.
FBI-da waxay sheegtay inuu Ninkaasi beeniyey codkiisa oo la duubay xilli uu la hadlayey Nin lagu hayey dabagal iyo in Mobaylkiisa laga helay Cod (Voicemail) uu u soo diray Nin lagu tuhunsanaa inuu ku biiray Alshabaab, waa sida ay hadalka u dhigeen.
Waa qofkii 3-aad ee ka tirsan qoyska C/risaaq Xaaji Raage Wehliye ee loo xiro baaritaano la xiriira waxa ay Reer Glabeedka ugu yeeraan Argagixiso, laakiin, Qareenka difacaa, oo lagu magacaabo Nina Ginsberg waxay sheegtay inuusan Kiiskiisa wax lug ah ku lahayn Kiisaska Wiilashiisa iyo inaan C/risaaq Xaaji Raage Wehliye lagu soo oogin wax la xiriira dhaqdhaqaaq Argagixiso.
Dhinaca kale, Wiilka Turjumaankaasi oo lagu magacaabo Yuusuf C/risaaq Xaaji Raage Wehliye waxaa horey loogu xukumay xabsi 10-sanno, kadib, markii lagu helay hawlgal uu ku kala gudbinayey hubka.
Sidoo kale, wiilka kale ee Yaxya C/risaaq Xaaji Raage Wehliye ayaa waxaa isagana la xukumay sannadkii 2017-kii, kadib, markii ay Hay’adda FBI-da xog-wareeysi baaritaan la yeesheen kadib, markii uu ka soo laabtay Masar sannadkii 2010-kii.
Ruux Al Shabaab usoo iibinjiray hubka oo la xukumay.
Akhriso: War-Murtiyeed 6 Qodob ka Kooban oo laga soo saaray Shirka Golaha Wasiirada ee Garoowe
Mukhtaar Roobow & Madaxweyne Axmed Madoobe oo arimo xasaasi ah ka wada hadlay
Wasiirka Cusub ee Wasaaradda Gaashaandhigga oo Maanta Xilkii wasaaradda la wareegay+Sawirro